Kutheni ubulungu kwi-Phi Beta Kappa Society Matters
I-Beta i-Kappa yindoda endala kwaye yenye yezona zihloniphekileyo kwiindawo ezizimeleyo zemfundo e-United States. Eyasungulwa ngo-1776 kwiKholeji kaWilliam kunye noMariya , iPhi Beta Kappa ngoku inezahluko kwiikholeji ezingama-286 neeyunivesithi (jonga uluhlu lwezahluko ze-Phi Beta Kappa ). Ikholejini inikwa isahluko se-Phi Beta Kappa kuphela emva kokuvavanya ngokukhawuleza kwamandla esikolweni kwi-liberal arts kunye nezesayensi. Izinzuzo zokuya kwiikholeji kunye nesahluko sePhi Beta Kappa kwaye ekugqibeleni ukufumana ubulungu zininzi:
I-Beta ye-Kappa iikholeji zihlonishwa kakuhle
I-Beta ye-Beta iKappa yokuKhuthaza kwi-College ye-Elmira. Elmira College / Flickr
Iipesenti ezili-10 kuphela zeekholeji ezizweni lonke zinesiqendu se-Phi Beta Kappa, kwaye ubukho besahluko bubonisa ukuba isikolo sinemigangatho ephakamileyo kunye neenkqubo eziqinileyo kwezobugcisa kunye nezesayensi.
Kwiikholeji ezineesahluko, malunga ne-10% yabafundi bajoyina iPhi Beta Kappa. Isimemo sinyanzeliswa kuphela xa umfundi ephethe i-GPA ephakamileyo kunye nobunzulu obungqina obubanzi kunye nobunzulu bokufundisisa kubuntu, kwizesayensi zentlalo nakwizesayensi. Ngokuqhelekileyo ukuba avunyelwe, umfundi kufuneka abe nomgangatho wesigaba esiphakathi kwe-A okanye ngaphezulu, ubuchule bolwimi lwangaphandle kwinqanaba lokuqala, kunye nobubanzi bokufunda obuhamba ngaphaya komntu oyintloko (umzekelo, umncinci, ombini, okanye Amacandelo afanele adlulise isheke somlingisi, kwaye abafundi abanokuphulwa kweekhontrakthi kwiikholeji zabo baya kukhanyela ubulungu. Ngako oko, ukukwazi ukuluhlula i-Phi Beta Kappa kwi-resume kubonisa izinga eliphezulu lokuphumelela kwezemfundo.
I Star Star Factor
Ubulungu ku-Phi Beta Kappa uthetha inxaxheba kwintlangano efanayo kunye neentambo eziphezulu ezidumileyo njengeCondoleezza Rice, uTom Brokaw, uJeff Bezos, uSusan Sontag, uGlenn Close, uGeorge Stephanopoulos kunye noBill Clinton. I-website ye-Phi Beta i-Kappa ithi amanqaku angama-17 kaMongameli wase-US, ii-39 eziPhathiswa zeNkundla eziPhakamileyo, kunye no-130 noNoelel Laureates baye babe ngamalungu ka-Phi Beta Kappa.
Kubafundi beekholeji kunye nabagqibeleleyo abagqibeleleyo, ubuchule bokunxibelelanisa be-Phi Beta Kappa akufanele bangaphantsi. Ngamalungu angaphezulu kwama-500,000 lonke, ubulungu be-Phi Beta Kappa budibanisa nabantu abaphumelelayo nabalumkileyo kulo lonke ilizwe. Kwakhona, uluntu oluninzi luba namaqela e-Phi Beta Kappa aya kukunxibelelana nabantu abaneminyaka ehlukeneyo kunye nemvelaphi. Ekubeni ubulungu bakho kwi-Phi Beta Kappa bubomi, inzuzo yobulungu ihamba ngaphaya kweminyaka yakho yekholeji kunye nomsebenzi wokuqala.
I-PBK isekela ubuGcisa boBugcisa nezoSayensi
I-Beta i-Kappa abaxhasi bemisebenzi emininzi kunye namabhaso okuxhasa ubugcisa be-liberal kunye nezesayensi. Ubulungu kunye nezipho ku-Phi Beta i-Kappa zisetyenziselwa ukubamba imfundo, ama-scholarships kunye neebhaso zenkonzo ezixhasa ukugqwesa ebuntwini, kwizesayensi zentlalo nakwizesayensi. Nangona i-Phi Beta i-Kappa inokubonelela ngamanani amaninzi kuwe, ubulungu buxhasa kwakhona ikusasa lobugcisa be-liberal kunye nezesayensi kweli lizwe.
Inqaku elingaphezulu ...
Amalungu e-Phi Beta Kappa afumana iindawo ezihloniphekileyo zoluntu eziluhlaza kunye neepinki kunye nepBK yepinki engundoqo ongayisebenzisa ukukunceda ukukhupha i-regalia yakho yokugqitywa kwezifundo.
Izizathu eziphezulu ze Skateboard
Ukwahlula kweRinous Rock usebenzisa iMifanekiso
Ii-Forty Acres kunye neMule
Intsingiselo yeArsenic Facts
Inomic Number 5 Element Facts
Ukuphuhlisa ukuqonda nokuqonda ngokuFunda ngokuphindaphindiweyo
Iimpawu zokusinda zaseItaly - Ukutya
Ingaba Inyosi Yomdwebi?